USilicone ungene ezimpilweni zethu | Honneur
USilicone ungene ezimpilweni zethu
I-Silicone ingene ezimpilweni zethu ngezindlela ezihlukile.
Zisetshenziselwa izindwangu zemfashini nezimboni. Njengama-elastomers kanye namarubber asetshenziselwa izinto zokunamathisela, ama-bonding agents, amakhethini endwangu, ukuhlanganiswa kweleyisi nabathungi bezithunga. Ngenkathi uketshezi kanye nama-emulsions kusetshenziselwa ukugqokwa kwendwangu, okokugcobisa i-fiber kanye nezinto zokusiza.
Ukuluka kwesilicone okusetshenziswe engutsheni kwenza kube nokuphefumula futhi kube ntofontofo. Ngenkathi ekusebenzeni kwezimboni kufana nezimoto, ezokwakha nezempahla yezemidlalo, ukuhlanganiswa kwe-silicone kunika amandla, ukumelana nokushisa okuphezulu, umswakama, imisebe ye-UV nomlilo.
Ubuchwepheshe be-Silicone buye bathola ukuthandwa kuzo zombili izicelo zemfashini nezindwangu zezimboni. Ngokwefashini, izindwangu ezakhiwe nge-silicone zinezinzuzo eziningi. Kunganciphisa i-shrinkage, ukuqala, ukugoqa mahhala, engeza ukuthamba kwendwangu, kuneziphakamiso zamanzi eziphakeme. Ukuluka kwendwangu kwe-silicone kwendlala kuqinisa ukuthokomala kwendwangu futhi ayilukhuni ekubandeni noma ukubola lapho kuvezwa izinga lokushisa eliphakeme.
Ama-silicones kulula ukuwacubungula yingakho abiza kakhulu. Ama-silicones angabonakala njengama-resin agelezayo wamahhala, amapulasitiki aqinile, ama-gels, irabha, izimpuphu kanye noketshezi oluncanyana kunamanzi noma obukhulu njengokunamathisela. Kulezi zinhlobo ze-silicone, imikhiqizo esekwe nge-silicone engenakubalwa yenzelwe futhi yenziwa emhlabeni wonke ngezinhloso ezahlukahlukene zezindwangu nezimboni.
Isikhathi sokuthumela: Jul-16-2020